Kunzwisisa Kukosha Kwesimba | Martech Zone
Chipiri, April 23, 2013 Chipiri, April 23, 2013 Douglas Karr
Isu nguva pfupi yadarika tanga tine kambani yaida kuti tibatsire kusimudzira chikuva chavo kune vanoita mari, vanhu vakakosha muindastiri, uye vatengi. Iyo kambani yanga isina mari yekuwana masevhisi edu saka takakumbira zvakasarudzika uye chikamu chemari kana purofiti inogona kubva mukukura kana kutengeswa kwekambani. Hazvisi kuzoitika. Ivo vaisakwanisa kufungidzira kuti isu taikumbira kwakanyanya kudaro kudiki diki danho kwatiri.
Kunze kwenjodzi yekusazomboripwa nekuda kwezvedu, pane mufananidzo mukuru kwazvo uyo tariro iyi isina kunzwisiswa. Ivo vanga vasiri kubhadhara kuedza kwatingavaitire ivo kubva pano kuenda kunze, ivo vanga vachibhadhara iyo kuyedza kwatave tichishandira kwadarika makumi maviri emakore apfuura. Isu tine imwe yeakanakisa maratidziro muindasitiri nekuda kwenguva uye kutarisirwa kunoiswa mukuvaka hukama neakakosha vabati. Isu tine rimwe remablogs akanakisa muindasitiri nekuda kwezviwanikwa zvataisa zuva nezuva kweanenge makore gumi. Mune mamwe mazwi, hatisi kusunga muripo kune zvatiri kuita, tiri kuisunga kune izvo zvatatova nokuita.
Kuwana kune vateereri vedu, kuwana kwedu hunyanzvi uye kuwana kune yedu network kwakakosha. Asi zvakakosha chete nekuti isu takaisa mari kune avo vateereri, hunyanzvi uye network kune edu ese mabasa. Tichiri kukumbira muzana iyo inogona kutungamira kumatanhatu manhamba, ivo vari kukumbira mukana wekuti isu takaisa mamirioni emadhora mukati.
5% Percent yeZero
Makambani anenge nguva zhinji anozvikoshesa ... kunyanya online. Bvunza chero munhu ane app uye ivo vanowanzo kukuudza iwe nezve bhiriyoni emadhora indasitiri ivo varimo uye mukana wechigadzirwa chavo kugadzira makumi kana mazana emamirioni emadhora. Kana vakapa 5% yekambani yavo yemamiriyoni zana emadhora, ndiwo madhora mashanu mamirioni! Tingave sei isu tinokodzera $ 5 mamirioni?
Dambudziko nderekuti havazi ivo zana remamiriyoni emadhora kambani. Muchokwadi, ruzhinji rwemakambani anokundikana zvachose. Pasina chinobudirira chevatengi-base, ichinyatso shambadzirwa muindasitiri, uye kuwana kune investment, iwo akakosha $ 0… zvisinei nekudyara kwavakaita kusvika zvino. Uye 5% ye0 i $ 0. Iwo akakosha $ 0 pasina rubatsiro rwedu… asi nerubatsiro rwedu, vane mukana wakakura wekuve wakanyanya kuwanda.
Kana pasina vimbiso yeperesenti yaigona kupihwa, isu taifanira kuenda kure netarisiro. Isu takanga tavazivisa kune imwe yakakosha inokonzeresa mukati medandemutande redu iro rinogona kutungamira mukukura nekukurumidza kana kudyara. Ivo vakafunga kuti kuedza kwaive kushoma… ingori email iyo yakatungamira mukuisirwa mune blog blog. Ivo havakoshesi chokwadi chekuti email iyoyo yakatitorera makore anouya uye chikonzero nei vakataurwa kwaive nekuda kweruremekedzo rwatakakurudzira kwatiri. Zvakatora basa rakawanda kwatiri kuti tisvike panguva iyoyo. Zvinosuruvarisa kuti havanzwisise kukosha ikoko.
Kuisa mari 5% yekambani mune anokurudzira anogona kutyaira mamirioni emadhora idiki diki yekudyara. Iyo kambani inogona kufamba nemamirioni uye, hongu, isu tinogona kubva pamwe nemari ine hutano zvakare. Asi iyo kambani ingadai isina kumbobvira yagamuchira iwo mamirioni dai isiri yekushandisa zviwanikwa zvedu (ruzivo, network, vateereri).
Ini handioni izvi zvakasiyana pane munhu apedza makore achinyora bhuku uye achida kuritengesa. Vanoenda kune muparidzi. Muparidzi iyeye ane kushambadzira, kugovera, uye kugona kutsikisa. Mukutsinhana neruzhinji rwemari, ivo vanoita bhizinesi nemunyori. Muparidzi ane njodzi kusatomboita dhora, asi anogona zvakare kuita yakawanda. Iye munyori ari panjodzi yekusambotengesa kopi, kunze kwekunge vawana mukana kune zviwanikwa zvemuparidzi.
Ihwo hukama hwebhizinesi hunoshanda mukati maanoverengeka maindasitiri uye ihwo hukama hwebhizinesi hunoshanda nehunyanzvi.
Apr 23, 2013 pa 10: 14 AM
Kufurira kwakafanana nehunyanzvi. Zvinogona kungotora mineti kuti ushandise, asi zvinotora hupenyu hwese kuwana.
Uyezve izvo zvaunazvo zviri nyore zvinoita sekurovedza muviri kubva pakuona kwevasina.
Zviri nyore kurerutsa chero chinhu chausina. Zvinonyanya kuve nyore kurerutsa izvo iwe zvausingakwanise kuwana ipapo zvisinei kuti imarii yaunoshandisa.
Apr 23, 2013 pa 11: 34 AM
Ichi chiitiko chakanakisa pamatanho mazhinji….
Kutanga, wese agency uye mupi wezano anofanira kuiverenga kuti vanzwisise zvirinani uye nekukoshesa kukosha kwavanazvo. Vachave vakapfuma nazvo.
Chechipiri, kutanga-kwese kunofanirwa kunzwisisa simba rekupenga musimba uye zvibodzwa zvekubata kumisikidza kwavo kana kukanganisa kukura kwavo.
Makore makumi maviri apfuura ndakashanda nemukurumbira wekushambadzira mushandi ndisingaite chinhu kunze kweinjiniya yemubatanidzwa Imwe chete yeaya mabhenefiti yakamuunzira $ 20 Million muvhiki imwe chete.
Ndatenda zvakare neyekuyeuchidza kukuru kuti Kufuridzira = kuwedzera. Sunga iyo.